Indawo yokuhlala yaseCuan eDunmore
Relax kwaye uphumle kule Apartment ihlangeneyo kodwa inobutofotofo kwindawo ezolileyo engaselunxwemeni i-5km ukusuka kwidolophu yaseClonakilty eDunmore. Yonwabela iimbono zolwandle ukusuka kwindawo yokuhlala / yokudlela. Ihonjiswe ngobuchule le ndlu yokulala yomgangatho ophantsi odityaniswe nendlu yabaniniyo inomnyango wabucala kwimihlaba ekwabelwana ngayo ene-BBQ yabucala ebanzi kunye nendawo yepatio efumana yonke imiba yelanga imini yonke. Indawo efanelekileyo yokukhenketha okanye ukonwabela iilwandle zasekhaya, enye kumgama wokuhamba.
Umgangatho ophantsi otofotofo wamagumbi amabini okulala anamhlanje alungele ukuya kuthi ga kubantu abane. Nokuba ulusapho okanye izibini okanye iqela elincinci labahlobo le ndawo ikulungele. Elinye lamagumbi okulala linokuba ngamawele okanye ibhedi enkulu yokumkani. Igumbi lokuhlambela lineshawari yemvula yemonsoon. Ikhitshi elincinci lixhotyiswe ngokupheleleyo kuzo zonke iimfuno zakho. Sikumgama wokuhamba weDuneen Beach kunye neDunmore House Hotel.
Yindawo entle yokuphumla ukuba ube kuyo. Phumla kule ndlu ipholileyo ujonge ngefestile enkulu kwaye uthathe umbono omangalisayo wolwandle. Kukho ukuhamba okumangalisayo kule ndawo, nokuba uyathanda ukuhamba emahlathini okanye ngaselunxwemeni.
Xa imozulu ilungile unokonwabela ipatio ngesiselo okanye ezimbini, i-avail yebarbeque kwaye iimbono zakho zisesibini. Ekuphela kwengxolo onokuthi uyive lulwandle.
Hamba uhambe uye eDuneen Beach kwaye ubuyele kwihotele yaseDunmore House ebonelela ngokutya nesiselo okugqwesileyo.
Sikwakufutshane neelwandle ezininzi zokuzonwabisa okanye ukuloba. Ilali yaseArdfield ikufutshane kakhulu kunye ne-pub yelizwe lasekhaya kunye nevenkile yokutyela emnandi.
SikwiNdlela ye-Wild Atlantic kunye nesiseko esifanelekileyo sokukhenketha iCork kunye neKerry.
Iindwendwe zizakuba nezazo imfihlo kodwa sihlala sikhona ukuba iindwendwe zisidinga ngayo nantoni na. Kungenjalo awuzukwazi ukuba sikhona.